Kitra – Amboaran’ny kaonfederasiona : resin’ny Harare FC tany amin’ny minitra farany ny Adema | NewsMada
Lavon’ny Harare FC, tamin’ny isa tery 3 noho 2, ny AS Adema, teo amin’ny lalao mandroso, amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona. Fihaonana notanterahina tao amin’ny kianja Harare, Renivohitr’i Zimbaboe, ny asabotsy tolakandro lasa teo. Niady ny fihaonana ary ekipa tsy atahorana mihitsy ny Zimbaboeanina. Raha ny tati-baovao, efa tany amin’ny fiafaran’ny fotoana (88 mn) vao nahatafiditra ny baolina fahatelo ho azy ry zareo Harare FC.
Na izany aza, efa nitarika tamin’ny isa 2 noho 0 ny tompon-tany vao nanenjika ny ekipa tompon’ny amboaran’i Madagasikara. Baolina tafiditr’i Ronald Chitiyo, teo amin’ny minitra faha-38 sy ny an’i Raphael Manuvire, teo amin’ny minitra faha-41. Somary nitandrintandrina sy diso niaro tena loatra ny Adema, tao anatin’ny fizaram-potoana voalohany, hany ka nahazo aina ny Zimbaboeanina, tamin’ny fanafihana izay tsy nihafihafiany mihitsy.
Nanome toromarika sy ny paikady amin’ny fanafihana, kosa i Yves sy Menakely Ruffin, teo amin’ny tapa-potoana faharoa ka nahitam-bokany izany. Nahatafiditra baolina i Florent, teo amin’ny minitra faha-47, rehefa nisy rindram-panafihana tsara sy haingam-pandeha. Tsy nijanona teo fa mbola nanampy iray indray i Kassah, tamin’ny alalan’ny “penalty”, tafidiny teo amin’ny minitra faha-51, taorian’ny fahadisoana nataon’ny vodilaharana zimbaboeanina. Nifamaliana avy eo ny fanafihana ary nisy mihitsy fotoana tokony hahafatesan’ny Adema baolina fa diso nikoropaka loatra ry zalahy ka votsotra izany.
Tsy mahakivy ny vokatra satria 1 noho 0 fotsiny no tadiavina, amin’ny lalao miverina atao any Mahajanga afaka tapa-bolana, dia tafita ny Adema.